Waa maxay faa'iidooyinka iibsashada YouTube jecel?
Kordhinta Dib ucelinta adoo Muujinaya Waa Worth Watching
Kuwa jecel ayaa Caawiya kordhinta Darajooyinka Mashiinka Raadinta
100% Bixin Ammaan & Dammaanad Leh
100% AdSense Nabdoon!
Waxyaabaha La Doonayo Waxaa Laga Siiyaa Dadka Dhabta Ah - Bots No!
Markasta Waxaan Soo Badbaadineynaa Wax Ka Badan Waxaad Na Dalbatay!
Natiijooyinka Bilawga Ka soo muuqashada 24-72 Saacadaha
Talooyin muhiim ah marka aad iibsanayso YouTube-ka waxa uu jecel yahay in uu kordho kanaalkaaga
Shaki kuma jiro in YouTube uu yahay mid ka mid ah adeegyada fiidyaha ee ugu weyn adduunka maanta. Sida laga soo xigtay a Warbixinta Statista, sahan ayaa muujisay in qayb weyn oo ka mid ah isticmaalayaasha Maraykanka (74%) ay ku qaataan inta badan wakhtigooda YouTube. Waa madal dadka u ogalaata in ay muuqaaladooda ku wadaagaan masraxa oo ay abuuraan saldhig dhagaystayaal ah. Dhegaystayaashani waxay soo dhejin karaan faallooyin, sida fiidiyowyada, oo waxay la wadaagi karaan waxa ku jira asxaabtooda.
Jeceshaha, aragtida, iyo faallooyinka ayaa aad muhiim ugu ah kanaal kasta oo YouTube ah. Tani waa sababta oo ah algorithmamka YouTube waxaa loogu talagalay inay door bidaan kanaalada iyo fiidiyowyada kuwaas oo muujinaya cabbir wanaagsan. Helitaanka wax badan oo la mid ah waxay la macno tahay waxa ku jira iyo kanaalkaagu waxay aad ugu dhowdahay inay sare u qaadaan natiijooyinka raadinta iyo talooyinka. Xeelado kala duwan ayaa la adeegsan karaa si loo helo wax badan oo jecel fiidiyowyadaada. Sidoo kale waad awoodaa iibso YouTube jecel ka YTpals, oo daawo kanaalkaaga oo koro Maqaalkani waxa uu ka doodi doonaa muhiimada ay leeyihiin waxa jecel YouTube-ka iyo xeeladaha kala duwan ee aad adeegsan karto si aad u kordhiso.
Algorithm-ka YouTube iyo Muhiimadda Jeceylka
Waxaa jira saddex algorithms oo kala duwan oo lagu isticmaalo YouTube, kuwaas oo u isticmaala cabbirka xulashada fiidiyowyada talooyinka. Mid ka mid ah algorithm ayaa doorta fiidiyowyo gaar ah si loogu muujiyo bogga guriga ee isticmaalaha, halka kan kalena uu tilmaamayo fiidiyowyada kale ee habboon ee lagula taliyay daawadayaasha. Sida algorithm-ka saddexaad, waxay doorataa ikhtiyaarka talinta tooska ah ee fiidyowga marka ay daawadayaashu daawanayaan fiidyaha. Marka YouTube ay dooranayso fiidiyowyada si ay u muujiso, mid ka mid ah shuruudaha ugu muhiimsan ee ay tixgeliso waa tirada jecel. Kuwa jeceli waxay kordhiyaan suurtogalnimada in fiidyowgu uu sare u qaado natiijooyinka raadinta iyo talooyinka. Haddii fiidyowgaaga uu helo qadar badan oo jecel muddo gaaban gudaheed, markaa si degdeg ah ayuu caan uga noqon karaa masraxa.
Jeceshaha YouTube ayaa aad muhiim ugu ah kanaalka. Waxay u sheegaysaa algorithmamka YouTube iyo daawadayaasha in heerarka ka qaybgalka dhagaystayaashu ay mudan yihiin in la xuso. Waxaad ka heli kartaa dulmar guud oo cabbirkaaga YouTube adigoo isticmaalaya qaybta falanqaynta. Tani waxay kuu sheegi doontaa fiidiyowyada sida ugu badan u jecel iyo kuwa aan helin inta badan ka qaybgalka dhagaystayaasha. Marka daawadayaasha cusub ay daawadaan fiidyahaaga, sidoo kale waxay u janjeeraan inay ku saleeyaan go'aankooda ku saabsan ka qaybgalka aad ka helayso macaamiishaada ama daawadayaashaada hadda.
Waxaa jiri kara waqtiyo aad ka heli karto aragtida fiidyahaaga, laakiin ka dhigista dhagaystayaashaada inay la falgalaan fiidiyowyadaada waa ciyaar kale oo kubbadda cagta ah. Waxaa laga yaabaa inaad xasuusiso daawadayaashaada inay ka qayb qaataan fiidiyowyadaada waqti ka waqti. Helitaanka jawaab celinta daawadayaashaada waa muhiim. Markaad ka hesho jawaab celin wanaagsan daawadayaashaada, daawadayaashaada suurtogalka ah way kordhi doonaan oo fiidyowyadaadu waxay bilaabi doonaan inay helaan aqoonsiga iyo kalsoonida ay mudan yihiin.
Faa'iidooyinka Helitaanka Tiro badan oo Jecel YouTube
Waxaa jira faa'iidooyin badan oo ku saabsan helitaanka jaceyl badan oo YouTube ah. Halkan waxaa ah liiska sababaha sababta in badan oo jecel YouTube ay muhiim u tahay kobaca kanaalka -
Soo jiidashada daawadayaasha: Daawadeyaashu waxay u malaynayaan in waxa ugu wanaagsan ay ku jiri doonaan qadar badan oo jecel iyo faallooyin. Inta badan ee jecel ee ku jira fiidiyowga, badiyaa taraafikada ayaa loo jihayn doonaa. Marka fiidiyowyada kanaalkaagu ay leeyihiin tiro badan oo jecel, waxay kordhisaa kalsoonida ay ku qabaan indhaha daawadayaasha.
Si loo ansixiyo joogitaanka bulshada: Fikradda warbaahinta bulshadu waxay ku shaqeysaa mabda'a fudud - inta badan ee jecel ama aragtida fiidiyooga, way sii weyn tahay awoodda bulshada. Kalsoonidaada goobta ayaa kordhisa marka aad leedahay tiro badan oo jecel. Markaad haysato cabbiro wanaagsan, daawadayaashu waxay sidoo kale aaminsan yihiin inaad haysato wax qiimo leh oo lagu daro booska. Ujeedadaas awgeed, waxaa muhiim ah in la dhiso niche on platform ah iyo in la horumariyo amar ku saabsan mawduuca. Tiro badan oo jecel ayaa meesha ka saaraysa tartamayaasha niche-kaaga waxayna keenaysaa kanaalkaaga safka hore.
Si loo kordhiyo darajada goob raadinta: Haddii aad mawduuc ka raadiso YouTube, waxaa si fudud loo ogaan karaa in fiidiyowyada ku jira liiska ugu sarreeya ee natiijooyinka raadinta ay yihiin kuwa leh tiro badan oo jecel. Markaad haysato tiro badan oo jecel, waxay nadiifinaysaa dariiqaaga qaybta raadinta YouTube. Marka qof raadiyo mawduuc la xidhiidha niche-kaaga, suurtogalnimada in fiidyahaagu kor u kaco marka la eego talooyinka ayaa kordha.
Ololaha suuqgeyneed ee lagu guuleystaySuuqgeeyayaal badan oo intarneedka ah ayaa isticmaala YouTube si ay u horumariyaan badeecadaha, adeegyada, iyo waxa ku jira qaarkood. Haddii fiidiyowyada kanaalkan oo kale ay helaan tiro wanaagsan oo jecel iyo aragtiyo, markaa waxay tilmaan u tahay xaqiiqda marketing digital ololuhu waa lagu guulaystay. Helitaanka waxyaabo badan oo jecel YouTube waa hab fiican oo lagu hubiyo in badeecada ama adeeggu ay soo jiidanayaan dadka.
Si aad sare ugu qaaddo maamulkaaga: Marka daawadayaasha ay arkaan in fiidiyowyadaadu ay leeyihiin tiro wanaagsan oo jecel iyo faallooyin, waxay u badan tahay inay kuu arkaan inaad tahay awood mawduuc. Waxay ku aamini doonaan macluumaadkaaga inay siiyaan macluumaadka saxda ah ee mawduuc gaar ah. Marka ay awooddaadu korodho niche-gaaga, waxaad awoodi doontaa inaad ka sarreyso tartamayaashaada iyo caannimadaada goobta ayaa kor u kici doonta.
Kordhinta taraafikada mareegahaagaFiidiyowyada leh tiro badan oo jecel waxay u muuqdaan inay helaan aragtiyo badan. Fiidiyowyada YouTube waxay u fiicnaan karaan hagida taraafikada boggaaga shaqsi ama ganacsiga. Tirada badan ee jecel YouTube waxay ka dhigan tahay daawadayaal badan, taas oo macnaheedu yahay hogaamin wanaagsan oo shirkadda ah.
Loogu talagalay macaamiisha sii kordheysa ee YouTube: Waxaan horay u soo sheegnay in tirada badan ee jecel iyo faallooyinka fiidiyowyadaada ay ka dhigan tahay inaad awood u yeelan doonto inaad soo jiidato daawadayaal badan. Marka dad badan ay bilaabaan daawashada macluumaadkaaga, waxay bilaabi doonaan inay ku biiraan macluumaadkaaga sidoo kale. Sidan, waxaad awood u yeelan doontaa inaad ku kasbato macaamiil badan adoo adeegsanaya YouTube-ka jecel.
Talooyin loogu Helayo Wax badan oo Jecel YouTube Fiidyahaaga
Si aad faa'iidooyinka lacagta uga hesho YouTube, waa muhiim in lala macaamilo daawadayaasha la beegsanayo. Dhisidda saldhig dhegaystayaal soo jiidasho leh waxay qaadataa waqti iyo dadaal. Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee kanaalada sii kordhaya waa in dadku ay la falgalaan fiidiyowyada. Waxaa suurtogal ah in aad haysato dad badan oo daawanaya fiidiyowyadaada, laakiin qaar badan oo iyaga ka mid ah ma tagaan kuwa jecel. Markaa waa inaad ku darto xasuusin joogto ah oo waydiisa daawadayaashaada inay soo dhigaan faallooyinka oo ay jecel yihiin fiidiyowyadaada. Sidan, waxaad awood u yeelan doontaa inaad kor ugu qaaddo falanqaynta hawlgelintaada YouTube.
Qaybta soo socota, waxaan ku siin doonaa dhowr tilmaamood oo lagu kordhinayo tirada jecel ee fiidiyowyadaada. Isticmaalka talooyinkan waxaad horumarin kartaa istaraatiijiyadaada kordhinta heerarka hawlgelinta ee goobta. Waxaa jira ikhtiyaar kale oo lagu kordhinayo jeceylkaaga YouTube, kaas oo aad ku dari karto marka lagu daro adeegsiga talooyinkan. Waa adiga oo ka iibsanaya YouTube-ka ilo lagu kalsoon yahay. Markaad iibsato waxyaabaha uu jecel yahay YouTube, waxaad xaqiijin kartaa kobaca kanaalkaaga oo wax yar ka dib waxaad bilaabi doontaa inaad aragto daawadayaasha dhabta ah iyo macaamiisha ku hawlan macluumaadkaaga.
Ku Kordhinta Jeceylka Mawduuca Fiidiyowga
Haddii aad rabto in aad wax badan ka jeclaato YouTube, waa muhiim inaad hubiso in waxa ku jira fiidyahaagu ay yihiin kuwo ilaa xoq ah. Waa kuwan qaar ka mid ah tabo si aad u horumariso macluumaadkaaga fiidyowga si aad u hesho jaceyl badan oo YouTube ah.
1. Abuur maaweelo iyo wax barasho
Dadku waxay u yimaadaan YouTube sababo kala duwan dartood. Mararka qaarkood, waxa laga yaabaa inay rabaan inay wax ka bartaan mawduuc mararka kalena waxay rabaan uun in lagu maaweeliyo. Markaad ku abuurto fiidiyowyada goobta, waxaa muhiim ah inaad hubiso inaad u soo bandhigto daawadayaasha qiimaha ugu fiican iyadoo loo eegayo baahidooda. Isla mar ahaantaana, waa inaadan wax u dhimin tayada. Waxaad baran kartaa waxay dhagaystayaashu rabaan inay arkaan adiga oo samaynaya cilmi-baaris ereyga muhiimka ah. Qaar ka mid ah mawduucyada sida weyn looga baadho YouTube waa cunto, madadaalo, muusig, ciyaaraha, ciyaaraha, safarka, ciyaaraha, quruxda, iyo moodada. Haddii kale, waxaad samayn kartaa codbixin online ah. Sidoo kale, iska hubi in qaabka fiidyahaagu uu la jaanqaadayo dhadhanka dhagaystayaashaada. Waxaad ka fikiri kartaa samaynta sida-fiidyaha, dib u eegista alaabta, unboxing, 10ka sare, rarista alaabta, Q&A, iwm.
2. U fiirso isbeddellada fayraska
Waxaad ka heli kartaa qadar wanaagsan oo jecel macluumaadkaaga adiga oo abuuraya fiidiyowyo ku salaysan mawduuc mar horeba isbeddelaya. Habkan, waxaad isticmaali kartaa isbeddellada fayraska si aad uga faa'iidaysato. Marka mowduuca qaar uu faayruska galo, dadku waxay rabaan inay wax badan ka bartaan. Waxaad tusaale u soo qaadan kartaa tartanka baaldiga barafka, tusaale ahaan. Markii ugu horeysay ee loolanku soo baxay, dadku waxay rabeen inay wax badan ka bartaan tan iyo markii ay arkeen dad badan oo caan ah oo isku dayaya isku mid. Waxaad sidoo kale diiradda saari kartaa fiidiyowyadaada mowduucyada isbeddelaya ee wararka iyo dhaqanka caanka ah. Ku xidhida fiidiyowyadaada isbeddellada caanka ah had iyo jeer ma fududa, si kastaba ha ahaatee, waxaad kor u qaadi kartaa waxa aad jeceshahay goobta adiga oo abuuraya macluumaad badan oo macne ah.
3. Wadashaqeynta YouTubers
Habka kale ee ugu fiican ee lagu kaxeeyo daawadayaal badan si ay ugu dhejiyaan jecel iyo faallooyinka fiidiyowyadaada waa adiga oo la kaashanaya YouTubers kale. Waxaad ka heli kartaa ka qaybgal wanaagsan daawadayaasha adiga oo ku soo bandhigaya saameeyayaasha warshadaha fiidyahaaga. Tani waa sababta oo ah kuwa wax saameeyay waxay mar horeba kuu hayaan dhegaystayaal dhisan. Markaad la shaqeyso YouTubers kale, waxaad ku dhiirigelisaa daawadayaashooda inay sidoo kale fiiriyaan kanaalkaaga.
Aragtiyo badan waxay ka dhigan tahay jecel iyo faallooyin badan. Marka lagu daro ku darista daawadayaashaada, la shaqaynta YouTubers waxay ku siin kartaa aragti kale oo ku saabsan mawduuca niche-kaaga. Tani waxay siinaysaa awood dheeraad ah kanaalkaaga booska YouTube. La shaqaynta YouTubers-ka kale waxay noqon kartaa mid labada dhinacba faa'iido u leh, maadaama ay kordhin doonto jeceylka iyo heerarka ka-qaybgalka ee labada kanaal.
4. Kaararka YouTube
Waxaad heli kartaa daawadayaal badan si ay u daawadaan fiidyahaaga oo ugu dambeyntii u dhejiso faallooyin badan iyo kuwa jecel adiga oo isticmaalaya qaabka kaararka YouTube. Kaararka YouTube waxay awood kuu siinayaan inaad kor u qaaddo fiidiyowyadaada kale gudaha fiidyaha. Waxaad isticmaali kartaa kaararka YouTube-ka
Si aad u xayeysiiso fiidiyowyada kale ee kanaalkaaga
Si loo xasuusiyo dadka inay ka tagaan waxyaabaha jecel
Si loogu dhiirigaliyo isticmaalayaasha inay buuxiyaan goobaha cod bixinta
Si aad ugu toosiso daawadayaasha boggaaga wax bixinta
Ku deeqida qof aan faa'iido doon ahayn
Si aad u hesho macaamiil badan kanaalka
Si aad gaadiidka ugu dirto mareegahaaga
Kaararka YouTube waxay u noqon karaan kuwo aad u wanaagsan kor u qaadida fiidyowyadaada waxqabadkoodu hooseeyo kuwaas oo helay aragtiyo iyo jaceyl yar. Si loogu daro kaadhadhka YouTube-kaaga, waa muhiim inaad eegto meesha ay aragtiyadu ka soo dhacayaan qaybta falanqaynta YouTube. Waxay ahaan lahayd fikrad wanaagsan in lagu daro kaararka YouTube wax yar ka hor bartaas.
5. Shaashadaha dhamaadka Video
Waxa kale oo aad isticmaali kartaa qaabka shaashadda dhamaadka si aad ugu darto wicitaanka ficilka kanaalkaaga YouTube. Waxaad isticmaali kartaa shaashadda dhamaadka si aad ugu sheegto daawadayaasha wax badan oo ku saabsan kanaalkaaga, waxaadna waydiisan kartaa inay jeclaadaan fiidiyowyadaada. Shaashashooyinka dhamaadka waxa kale oo loo isticmaali karaa soo jeedinta fiidyaha la daawado xiga. Sidan, waxaad awood u yeelan doontaa inaad ku toosiso daawadayaashaada qaar ka mid ah fiidiyowyadaada kuwaas oo helay aragtiyo yar iyo kuwa la jeclaystay ee hore. Si aad ugu darto shaashadaha dhamaadka fiidyahaaga waa inaad dhex martaa istuudiyaha YouTube oo guji sumadda qalinka si aad u eegto faahfaahinta muuqaalka. Qaybtaas, waxaad ka heli doontaa xulashada Screen End. Waxaad dooran kartaa inaad ku darto nooca shaashadda dhamaadka ah ee aad rabto inaad ka hesho xulashada buluuga ah ee lagu daray, ka dib, waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa guji kaydinta.
6. Kor u qaadida fiidiyowyada goobaha warbaahinta bulshada
Hab kale oo weyn oo lagu kordhinayo jeceylka YouTube waa adiga oo kor u qaadaya fiidiyowyadaada aaladaha kale ee warbaahinta bulshada ee internetka. Shabakado kale oo badan oo warbaahinta bulshada ah sida Facebook, Instagram, iyo Twitter ayaa sidoo kale leh wax muuqaal ah. Kanaaladan waxa loo isticmaali karaa in kor loogu qaado fiidyahaaga si loo kordhiyo tirada aragtiyada, kuwa la jecel yahay, iyo macaamiisha. Instgram-ka, waxaad isticmaali kartaa sifada sheekooyinka si aad ula wadaagto teaers-ka fiidyahaaga YouTube oo aad ku darto xidhiidhka fiidyaha noolahaaga. Kor-u-qaadista fiidyahaaga YouTube-ka waa hab wanaagsan oo lagu tuso taageerayaashaada inaad ku leedahay bulsho firfircoon YouTube-ka iyo inay sidoo kale qayb ka noqon karaan. Marka ay daawadayaasha cusub daawadaan fiidyahaaga, waxay soo dhejin doonaan faallooyin iyo jeceyl badan.
Kordhinta Jecelka SEO
Haddii aad rabto inaad kordhiso daawadayaashaada iyo ka-qaybgalka goobta, waxaa muhiim ah inaad wax ka barato farsamooyinka search engine optimization (SEO). Algorithm-ka YouTube wuxuu shaandheeyaa waxa ku jira makiinadaha raadinta iyadoo lagu saleynayo arrimo gaar ah. Markaa, waxa ay noqonaysaa muhiim inaad sare u qaaddo cinwaanadaada, sumadahaaga, iyo sharaxaada fiidyaha. Waa kuwan qaar ka mid ah siyaabaha aad ku kordhin karto jeceylka fiidiyowyada YouTube-ka ee SEO:
1. Abuurista cinwaanno fiidiyoow ah oo kelmado muhiim ah qani ah
Cilmi-baarista ereyga muhiimka ah waa lama huraan si loo hubiyo in nuxurkaagu uu gaaro daawadayaasha bartilmaameedka ah. Waa weedho iyo kelmado ay dadku u adeegsadaan raadinta nuxurka. Markaad u farsamayso macluumaadkaaga agagaarka ereyada muhiimka ah ee bartilmaameedka ah, waxaad xaqiijin kartaa in makiinadaha raadinta ay kugula taliyaan daawadayaasha bartilmaameedka ah. Si aad u kordhiso fursadahaaga aad ku heli karto aragtiyo iyo wax badan adiga oo ku daraya ereyada muhiimka ah ee khuseeya cinwaankaaga. Sidan, daawadayaashaadu waxay awood u yeelan doonaan inay si sahlan u helaan macluumaadkaaga. Waxaa jira aalado badan oo cilmi baarista ereyada muhiimka ah oo laga heli karo internetka kuwaas oo loo isticmaali karo in lagu helo ereyada muhiimka ah ee khuseeya. Hab kale oo lagu helo ereyada muhiimka ah ee YouTube-ka gaarka ah waa adiga oo mowduuca la galiya barta raadinta. Erayada furaha ah waa shayada la saadaaliyay ee soo baxa marka aad mowduuc raadiso. Erayadan la saadaaliyay ayaa ah waxa inta badan daawadayaasha ay raadinayaan.
2. Ku dar ereyada muhiimka ah ee sharraxaadda fiidiyowga
Waxaad u wanaajin kartaa sharraxaadda fiidyaha sida cinwaannada fiidyaha. Sharaxaada muqaalku waa aagga ay daawadayaashu ku bartaan waxa fiidiyowyadaadu ku saabsan yihiin. Waxa kale oo loo isticmaali karaa in lagu kordhiyo darajadaada natiijooyinka raadinta iyadoo la adeegsanayo ereyada muhiimka ah ee khuseeya. Adeegsiga istaraatiijiyada ereyga muhiimka ah kaliya ma hagaajin doontid heerka gujinta laakiin sidoo kale ma kordhin doontid waxaad jeceshahay iyo aragtidaada. Sharaxaada fiidyaha waa in loo qaabeeyaa si ay u qabato xiisaha daawadayaasha, iyadoo wali lagu daro ereyo muhiim ah.
3. Ku dar calaamado fiidiyowyada YouTube-ka
Calaamadaha fiidyaha ee YouTube ayaa aad ugu fiican in lagu kala saaro macluumaadkaaga algorithm raadinta. Waxay kaa caawinaysaa fahamka mawduuca fiidyahaagu bartilmaameedsanayo. Marka lagu daro cinwaanka iyo sharaxaadda fiidyaha, summada fiidyowga waa in si habboon loogu isticmaalo fiidiyowyadaada. Waxa kale oo aad eegi kartaa summada fiidiyowyada ay adeegsadaan tartamayaashu si ay u horumariyaan fahamka kuwa ku habboon nichegaaga. Si aad u daawato calaamadaha fiidiyoo kasta, tillaabooyinka soo socda ayaa la raaci karaa -
Tag fiidyaha YouTube adoo isticmaalaya biraawsarkaaga shabakad kasta.
Midig ku dhufo bogga oo dooro "View Page Source."
Riix Ctrl + F (Windows) ama Command + F (Mac). Koodh isha ayaa soo bixi doona kaas oo markaa loo isticmaali karo in lagu raadiyo ereyada muhiimka ah.
Kadib waxaad awoodi doontaa inaad aragto liiska tags ee loo isticmaalo fiidiyowgaas.
4. Isticmaal sawirka thumbnail si aad uga faa'iidaysato
Waxaad ku heli kartaa jacayl badan oo fiidiyowyadaada ah adiga oo wanaajinaya sawirada thumbnail ee fiidyahaaga. Sawirada thumbnail-ka ayaa muhiim u ah ka dhigista fiidyahaaga mid ka muuqda bogga hoyga ee YouTube, liiska fiidyaha ee la soo jeediyay, natiijooyinka muuqaalka mashiinka raadinta, iyo sidoo kale warbaahinta bulshada. Haysashada thumbnail indho-qabad leh fiidyowgaaga waxay ku dhiirigelin kartaa dad badan inay daawadaan oo dhajiyaan faallooyinka iyo waxay jecel yihiin macluumaadkaaga. Cabbirka lagu taliyay fiidiyowyadu waa qiyaastii 1280 × 720, kaas oo ah ugu yaraan ballac 640 pixels. Sawirrada tayada sare leh waa inay lahaadaan xarfo soo jiidasho leh si loo kordhiyo akhrinta. Waxa kale oo aad u isticmaali kartaa meelo isku dhow oo waji ah si aad u kiciso xidhiidh shucuureed dhagaystayaasha. thumbnailku waa inuu ku habboonaadaa waxa ku jira fiidyowga Isticmaalka hacks-ka gujinaya si aad u wanaajiso sawirka thumbnails marnaba fikrad fiican ma aha maadaama ay marin habaabiso daawadayaasha.
5. Isticmaal qoraalo muuqaal ah
Qoraallada fiidyaha waxaa loo yaqaan qoraallada xiran ee YouTube. Qoraallada fiidyaha waxay wanaajin karaan darajada fiidyahaaga goobta iyo sidoo kale waxay ka dhigi karaan kuwo la heli karo. Adigoo isticmaalaya qoraalo xiran, dhegeystayaal weyn ayaa arki kara fiidiyowyadaada. Tani waa sababta oo ah qayb weyn oo ka mid ah daawadayaasha waxaa laga yaabaa inaysan ku hadlin isku luqad ama xitaa waxay yeelan karaan cillad maqal. Marka lagu daro qoraallada xidhan, waxaad ka dhigaysaa fiidyowyada kuwo la heli karo oo waxaad ku martiqaadaysaa daawadeyaal badan si ay ula falgalaan macluumaadkaaga oo u dhejiyaan faallooyinka iyo kuwa jecel.
Iibka Jeceylka YouTube - Muhiimada iyo Faa'iidooyinka
Muhiimadda ay leedahay in YouTube-ka la jeclaado ayaa hore loogu sheegay qodobbada kor ku xusan. Mid ka mid ah dariiqo aad ku heli karto jaceyl badan oo fiidiyowyadaada ah waa adigoo weydiiya daawadayaashaada inay jeclaadaan, wadaagaan oo ay ku biiraan kanaalkaaga. Si kastaba ha ahaatee, mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inaadan ka helin ka qaybgalka loo baahan yahay daawadayaashaada xitaa ka dib markaad isticmaasho dhammaan xeeladaha aan soo sheegnay. Xaaladdan oo kale, Waxay ahaan lahayd fikrad wanaagsan inaad bixiso YouTube-ka jecel bixiyeyaasha adeegga la isku halayn karo sida YTpals.
Iibsashada waxyaabaha jecel YouTube waxay ku siin doontaa daawasho joogto ah, taas oo ugu dambeyntii caawin doonta dhiirigelinta dad badan inay ku biiraan kanaalkaaga oo ay la falgalaan macluumaadkaaga. Fiidyowyadaadu waxay la kulmi karaan daawadayaasha cusub, kuwaas oo aan awoodin inay ogaadaan kanaalkaaga haddii kale. Aynu eegno qaar ka mid ah faa'iidooyinka iibsashada YouTube-ka.
1. Ku siiya kanaalkaaga caddaynta bulsho ee goobta
Haddii aad rabto inaad fiidiyowgaaga ka dhigto mid faayras ah oo aad suuqgayso nuxurka muuqaalka, waa muhiim inaad xoogaa awood ku yeelato goobta. Sida lagu sheegay maqaalkan, caannimada ama joogitaanka goobta waxa lagu kordhin karaa iyada oo la hagaajiyo cabbirada kanaalkaaga YouTube. Jeceshaha YouTube waa mitir muhiim ah oo lagu cabbirayo heerka bulsho ee kanaalka. Markaad iibsato waxyaabaha jecel, waxaad awoodi doontaa inaad hesho aqoonsi oo aad kordhiso kalsoonida goobta. Waxay u shaqeysaa sidii caddayn bulsho, taas oo kaa caawin doonta inaad hesho daawadayaal iyo macaamiisha mustaqbalka.
2. Kordhi darajada natiijooyinka raadinta
Sida ugu wanaagsan ee lagu kordhin karo daawashada fiidyahaaga waa adiga oo wanaajinaya si ay uga soo muuqdaan natiijooyinka raadinta. Marka loo eego cilmi-baaris dhowaan la sameeyay, in ka badan 60 boqolkiiba daawadayaasha YouTube waxay ka raadiyaan fiidiyowyada mawduucyada bar raadinta halkii ay booqan lahaayeen kanaalka. Waxaad ku kordhin kartaa darajada fiidyahaaga natiijooyinka raadinta adiga oo wanaajinaya cabbiradaada ka kooban kuwa jecel, aragtida, iyo faallooyinka. Markaad iibsato YouTube-ka jecel, waxay u soo jeedinaysaa algorithmamka YouTube in heerarka hawlgelintaadu ay sarreeyaan. Sidan, waxaad awood u yeelan doontaa inaad sare u kacdo natiijooyinka raadinta markay dadku ka baadhayaan mowduuc aad u fiican. Ugu dambeyntii, kanaalkaagu wuxuu sidoo kale awood u yeelan doonaa inuu soo saaro taraafikada dabiiciga ah, taas oo kor u qaadi doonta heerarka ka-qaybgalka xitaa intaa ka sii badan.
3. Soo jiidashada daawadayaasha la beegsanayo
Marka aad abuurto muuqaal mawduuc ku saabsan, waxaad doonaysaa inaad hubiso inuu gaadhay dhegaystayaashii saxda ahaa ee ka mahad celinaya fikradaada. Waxaad xaqiijin kartaa in fiidyahaagu gaadho dadka la beegsanayo adiga oo ka iibsanaya YouTube-ka ilo lagu kalsoon yahay sida YTpals. Marka aad haysato tiro badan oo jecel iyo faallooyinka fiidiyowyadaada, waxay muujinaysaa inaad leedahay awood go'an oo mawduuca ah. Daawadeyaasha cusub ayaa aakhirka aamini doona nooca macluumaadka aad abuurayso. Iibsashadu waxay jeceshay waa istaraatijiyad aad u wanaagsan si aad u soo jiidato dhagaystayaasha aad beegsanayso.
4. Si loogu wado taraafikada goobaha kale ee warbaahinta bulshada
Marka aad bixiso wax jecel, waxay kordhinaysaa aragtidaada goobta. Daawadeyaasha ayaa si fudud u heli kara macluumaadkaaga ka dibna tirada macaamiishu waxay bilaabayaan inay kordho si joogto ah. Daawashadaada YouTube-ka waxa lagu jihaynayaa goobaha kale ee warbaahinta bulshada halkaas oo aad rabto in aad samaysato joogitaan si siman u adag. Tani waxay si gaar ah faa'iido u leedahay suuq-geynta alaabtaada haddii aad leedahay ganacsi. Dadka waxaa lagu yaqaanaa inay u fiirsadaan waxyaabaha ku jira muuqaalka, si aad u hagi karto taraafikada YouTube mareegaha, taasoo faa'iido weyn u leh kordhinta iibinta alaabada ama adeegyada.
5. Bilawga safarka YouTube-ka
Markaad bilaabayso kanaalka, way adkaan kartaa inaad hesho daawadayaasha si ay u daawadaan macluumaadkaaga. Haddii aad rabto inaad bilowdo xirfadaada YouTube, ka-qaybgalka fiidiyowyadaada ugu horreeya aad ayey muhiim u tahay. Iibka waxyaabaha jecel YouTube waxa ay ku dejin kartaa jihada saxda ah oo kanaalkaagu waxa uu awood u yeelan doonaa in uu si tamar leh ku bilaabo. Waxay kordhin doontaa daawashadaada goobta, iyo wakhti ka dib macaamiishu waxay sii ahaan doonaan kuwo ku hawlan macluumaadkaaga. Waxay kaa caawin kartaa inaad xirfadaada YouTube u qaado heerka xiga.
6. Helitaanka caannimada
Haddii aad rabto inaad noqoto dareen YouTube ah, markaa iibsashada waxyaabaha jecel YouTube waxay kugu dejin kartaa wadada saxda ah si aad u gaadho yoolalkaaga. Kasbashada caannimada YouTube waxay dadka u furaysaa adduunyo fursado, oo ay ku jiraan kafaalaqaadyada. Haddii aad sii waddo abuurista fiidiyowyo soo jiidasho leh, waxaad awoodi doontaa inaad dhisto saldhig macaamiisha u go'an. Kaliya maaha inay ku lug yeeshaan macluumaadkaaga laakiin sidoo kale waxay kor u qaadi doonaan.
7. In laga hormaro tartanka
YouTube waa goob tartan aad u sareysa, halkaas oo malaayiin muuqaal ah lagu daro maalin kasta. Haddii aad rabto inaad ka horraysato tartanka, waa inaad isticmaashaa xeelado kaa caawin doona korriinkaada. Fursadaha ayaa ah inta badan tartamayaashaadu inay iibsadaan YouTube jecel iyo faallooyinka. Sidaa darteed, waxay ahaan lahayd fikrad wanaagsan in la iibsado YouTube jecel kanaalkaaga haddii aadan rabin inaad dhibaato ku noqoto.
Hadda oo aad ogtahay muhiimada iyo faa'iidooyinka iibsashada YouTube-ka, waxaad ka fiirsan kartaa inaad u soo iibsato kanaalkaaga si ay uga caawiso koritaankooda. Marka aad ka iibsatid YTpals, waxaad awoodi doontaa inaad kordhiso haynta daawadayaasha fiidiyowyadaada. Natiijooyinka waxay bilaabi doonaan inay soo muuqdaan 24 ilaa 72 saacadood ka dib marka la dalbado, iyo wixii la mid ah waxaa dhiibi doona dadka dhabta ah halkii ay ka ahaan lahaayeen bots. Waxaad nala soo xidhiidhi kartaa maanta si aad wax badan oo dheeraad ah oo ku saabsan adeegyada YouTube premium ka ogaato YTpals.
Waxyaabaha YouTube Jecel ayaa lagu daray gaadhigaaga.
1000 Muuqaal ($ 20)5000 Muuqaal ($ 60)10000 Muuqaal ($ 100)25000 Muuqaal ($ 200)50000 Muuqaal ($ 350)100000 Muuqaal ($ 600)
10 Faallooyin ($ 20)20 Faallooyin ($ 35)30 Faallooyin ($ 50)50 Faallooyin ($ 80)100 Faallooyin ($ 140)
100 saamiyada ($ 10)250 saamiyada ($ 20)500 saamiyada ($ 30)1000 saamiyada ($ 50)2000 saamiyada ($ 80)5000 saamiyada ($ 130)10000 saamiyada ($ 250)